Kabajamtoota Uummata Oromoo, Aartistoota, qaamolee sagantaa kana deeggaraa turtan hundaaf – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKabajamtoota Uummata Oromoo, Aartistoota, qaamolee sagantaa kana deeggaraa turtan hundaaf
Akkuma Uummanni Oromoo hundi beektan ji’a sadii Oliif Haadha Warraa Jeneraal Taaddasaa Birruu Aaddee Lulee Warqee Dinagdee dhukkuba kaleetiin waggaa tokkoo oliif dhukkubsachaa turan deeggaruuf sagantaa galii walitti qabuu Amajjii 12/2018tti Magaala Adaamaatti qopheessuuf koreen guddaan nama 30 ol qabu hojjachaa turree erga waan hundumaa xumuree, galii kanarraas birrii miliyoona Sadii ol galchuun lubbuu Haadha Warraa goota kana baraaruuf osoo jirruu akka tasaa hardha jechuunis Jimaata 11/2018 sa’aatii 4:00tti Waajjira Kantiibaa Magaalaa Adaamatti Koree hundaa nu waamanii sagantaa Teletoonii kana akka dhaabnu nutti himani.
Nutis maaliif nama du’uuf jiru lubbuu hin baraarre keessattu Haadha Warraa Abbaa Qabsoo Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruu jennaan maatii Taaddasaa Birruu Dubartiin kun kan J/Taaddasaa miti jedhanii karaa Abukaattoo isaanii xalayaa galfataniiru nuun jedhanii Xalayaa gadii kana nutti kennani.
Waan nama gaddisisuu Ilmi J/Taaddasaa Birruu Darajjee Taaddasaa haadha isaafi haadha warraa goota kanaa waggaa tokkoo oliif ji’atti kuma 30 kanfalee Hospitaala Adaamaa Jeneraalitti yaalchisaa turullee amma gahee dadhabeera.
Jaartiin kun boru yoo du’an eenyutu itti gaafatama?, Abukaattoon kun maaliin dubartiin kun haadha warraa isaa miti jedhe, Darajjeenoo akkamitti ilmasaa miti jedhe?, Ragaa DNA qabaa laata? kana seeratu hiika, baasii hanga ammatti Darajjeen baaseehoo eenyutu deebisa? Egereen haadha warraa goota kunihoo maal ta’a?
Kamumaafuu amma dhimmi kun qulqullaahee dhugaan bahee sagantaan yaanne hojjatamutti Aartistoonnii Oromoo dhimma kanaaf abbummaan hojjachaa turtan, Namoonnii Tikkeettiifi Tisheertii suuraa goota kanaa qabu bitattan, TV OBS beeksa sagantaa kanaa tolaan nuu dabarsee maqaa koree sagantaa kanaafii maqaa Uummata Oromoo hundaan isin galateeffanna. Rabbiimmoo lubbuu jaartii kanaa nuufaa tiksu.
Gadaan Quufaa Barri Gabbina!
Via: Margaa Angaasuu